Nolosha Falköping | Somaliska
Magaalada Falköping waa magaalo ku taala galbeedka Sweden kana tirsan gobolka Västra Götaland. Magaalada ayaa waxay u dhowdahay caasimada Labaad ee Sweden Göteborg iyadoo u jirta 1 saac. Falköping waxaa ku nool dad gaaraya 31 513 sanadka 2011. Magaalada Falköping ayaa waxaa ku nool Soomaali la taaban karo iyadoo ay maamulka magaalada ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen Soomaalida cusub. Hadaba waxaan mowduucaan ku eegeynaa sida ay tahay qeybaha kala duwan ee nolosha magaalada. Guryaha: Waqtiyadii hore ayay fududeyd in laga helo guryaha magaalada balse waqtiyadii dambe dadka ayaa ku soo batay iyadoo hada ay qaadato in qofku sugo ilaa 8 bilood si uu uga helo guri magaalada. Qiimaha guryaha ayaa kala ah 1 qol oo u dhexeeya 2500-3000Kr halka 2-qol ay u dhexeeyaan 3000-4000kr. Shirkadaha guryaha bixiya ayaa waxaa la shaqeeya wiil Soomaaliyeed oo u dhexeeya iyaga iyo Soomaalida. Waxbarashada: Magaalada Falköping jaamacado kuma yaalaan balse waxaa ku yaal dugsi sare oo Sweden magac ku leh. SFIga ayaa la sugaa ilaa 2 bilood marka qofka uu cusubyahay. SFIga ayaa lagu dhigtaa xarunta Lärcenter oo ay sidoo kale dhigtaan arday badan oo Swedish iyo ajanabi ah. Qaadashada Körkort ayaa la ii sheegay in ay ka sahlantahay Falköping. Soomaalida qaar ayaa ii sheegay in iskuulka SFIga laga mamnuucay in ay ku tukadaan iyo in ay telefoonada ku hadlaan. Shaqada: Soomaalida magaalada ku dhaqan ayaa ii sheegay in intooda badan ay heleen shaqooyin waqti gaaban ah oo 6 bilood ilaa 1 sano ah kuwaasoo uu bixiyo kamuunka. Praktiga qasab kuma ahan dadka balse qofkii doonaya waxay u sahleysaa in uu shaqo ku helo. Sidoo kale Soomaalida ayaa waxay ka qeyb qaataan mashruucyo kala duwan iyadoo Anders Lindström oo ka mid ah dadka ka shaqeeya kamuunka uu ii sheegay in ay hada hawshooda wadaan mashruuc beeralay looga dhigayo Soomaalida oo hada ay bilaabeen abuuritaankii khudaarta. Nolosha Guud iyo isku Socodka: Soomaalida Falköping ayaa waxay leeyihiin jaaliyad firfircoon oo si weyn ugu dadaasha arimaha mideynta qoysaska . Magaalada ayaa waxaa ku yaala dukaamada waaweyn sida ICA, Wills iyo COOP iyadoo sidoo kale ay ku yaalaan 2 dukaan oo ay leeyihiin dad carab ah. Waxay Sidoo kale Soomaalidu leeyihiin lokal jaaliyadu ay leedahay iyo goob ay ku tukadaan. Xaga isku socodka ayaa magaalada waxaa ka shaqeeya basas iyadoo dadka ay iska dhiibayaan haddii aay doonayaan kaarka. Sidoo kale Falköping ayaa waxaa mara tareemo kala duwan oo isku xira Göteborg iyo Stockholm. Warbixintani waa mid ka mid ah barnaamijkii aan ugu tala galnay in aan kaga warano nolosha kamuunada Sweden. Adiguna waxaad noo soo diri kartaa warbixin ku saabsan nolosha kamuunka aad ku nooshahay.
Magaalada Falköping waa magaalo ku taala galbeedka Sweden kana tirsan gobolka Västra Götaland. Magaalada ayaa waxay u dhowdahay caasimada Labaad ee Sweden Göteborg iyadoo u jirta 1 saac. Falköping waxaa ku nool dad gaaraya 31 513 sanadka 2011.
Magaalada Falköping ayaa waxaa ku nool Soomaali la taaban karo iyadoo ay maamulka magaalada ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen Soomaalida cusub. Hadaba waxaan mowduucaan ku eegeynaa sida ay tahay qeybaha kala duwan ee nolosha magaalada.
Guryaha: Waqtiyadii hore ayay fududeyd in laga helo guryaha magaalada balse waqtiyadii dambe dadka ayaa ku soo batay iyadoo hada ay qaadato in qofku sugo ilaa 8 bilood si uu uga helo guri magaalada. Qiimaha guryaha ayaa kala ah 1 qol oo u dhexeeya 2500-3000Kr halka 2-qol ay u dhexeeyaan 3000-4000kr. Shirkadaha guryaha bixiya ayaa waxaa la shaqeeya wiil Soomaaliyeed oo u dhexeeya iyaga iyo Soomaalida.
Waxbarashada: Magaalada Falköping jaamacado kuma yaalaan balse waxaa ku yaal dugsi sare oo Sweden magac ku leh. SFIga ayaa la sugaa ilaa 2 bilood marka qofka uu cusubyahay. SFIga ayaa lagu dhigtaa xarunta Lärcenter oo ay sidoo kale dhigtaan arday badan oo Swedish iyo ajanabi ah. Qaadashada Körkort ayaa la ii sheegay in ay ka sahlantahay Falköping. Soomaalida qaar ayaa ii sheegay in iskuulka SFIga laga mamnuucay in ay ku tukadaan iyo in ay telefoonada ku hadlaan.
Shaqada: Soomaalida magaalada ku dhaqan ayaa ii sheegay in intooda badan ay heleen shaqooyin waqti gaaban ah oo 6 bilood ilaa 1 sano ah kuwaasoo uu bixiyo kamuunka. Praktiga qasab kuma ahan dadka balse qofkii doonaya waxay u sahleysaa in uu shaqo ku helo. Sidoo kale Soomaalida ayaa waxay ka qeyb qaataan mashruucyo kala duwan iyadoo Anders Lindström oo ka mid ah dadka ka shaqeeya kamuunka uu ii sheegay in ay hada hawshooda wadaan mashruuc beeralay looga dhigayo Soomaalida oo hada ay bilaabeen abuuritaankii khudaarta.
Nolosha Guud iyo isku Socodka: Soomaalida Falköping ayaa waxay leeyihiin jaaliyad firfircoon oo si weyn ugu dadaasha arimaha mideynta qoysaska . Magaalada ayaa waxaa ku yaala dukaamada waaweyn sida ICA, Wills iyo COOP iyadoo sidoo kale ay ku yaalaan 2 dukaan oo ay leeyihiin dad carab ah. Waxay Sidoo kale Soomaalidu leeyihiin lokal jaaliyadu ay leedahay iyo goob ay ku tukadaan.
Xaga isku socodka ayaa magaalada waxaa ka shaqeeya basas iyadoo dadka ay iska dhiibayaan haddii aay doonayaan kaarka. Sidoo kale Falköping ayaa waxaa mara tareemo kala duwan oo isku xira Göteborg iyo Stockholm.
Warbixintani waa mid ka mid ah barnaamijkii aan ugu tala galnay in aan kaga warano nolosha kamuunada Sweden. Adiguna waxaad noo soo diri kartaa warbixin ku saabsan nolosha kamuunka aad ku nooshahay.
Maamulka doorashada oo Mursal Isa ku eedeeyay in uu si qaldan u dhaqmay
Malmö: Yuhuuda & Muslimiinta
May 11, 2011 at 11:36
JImcaale saaxiib arrintii waalidiinta iyo carruurta kala maqan war ma laga hayaa. Anigu waxaa bogga ” Riksdagen.se” ka aqriyey qodobbo badan oo laga dooday oo ay ka mid aheyda riinta reerha kala maqan. Wasiirka qaxootiga ayaa soo gudbiyey in somalida ay dhib ku qabto sharciga ah in qofku pass giltig ah wato. Anigoo taas ka duulaayo ayaan la xiriiray “socialförsäkringsutskottet” qof dumar ayaan la hadlay wax jawaab cadna ima siin. Waxaan ku qori waxa meehsa ku qoran akhriyey waana fahmi waayey ee ma luqad siyaasiyiinta kaliyihi fahmi karaan. Waxey igu tiri tiri weli goaan lama gaarin ee la sooco sida wax isu bedelaan. Waxaan ku iri taa micnaheedu waa arrinta ha iska jiitanto iyadoon goaan cad la siin dadka taasoo qaadan karto sanado badan. Waxey igu tiri waxaan kuu gudbinaa qof kale oo iiga xeel dheer kadibna telefoonka waa damey. Daqiiqado ka hor ayaan wacay.
Jimcaale somalida u sheeg ineysan is dhigan. Anigu waxaan aaminsanahay haddii 2-3 mudaaharaad lagu celiyo in wax is bedelayaan.
asc waxaan ka mahadcelinayaa maamulka webka warbixintan qiimaha badan ee uu soo diyaaariyay iyo sida wanaagsan ee uu u kala dhigdhigay ama u faahfaahiyay u qaabeeyay.
Run ahaantii warbixinadan oo kale waa warbixino faaido u leh bulshada lagana faaidaysan karo sahana u noqon kara qofka oo soomaali ah oo sweden ku nool oo raba inuu ka guuro magaalada uu degan yahay waana dalbarasho iyo hawl fudadayn adoo gurigaaga jooga aad magaalo kasta warbixinteeda aad ogaatay.aad ayaad u mahadsan tihiin maamulka webka somaliska. sii wada ayaan idin leenahay anana waxii warbixino ah waan idinku caawinaynaa.